I-Ultrasonic Decarboxylation yama-Cannabinoids - I-Hielscher Ultrasound Technology
Ama-cannabinoids ama-decarboxylated njenge-CBD, i-THC kanye ne-CBG phakathi kwamanye amaningi aziwa njengefomu elisebenzayo, elibonisa imiphumela ethinta kakhulu futhi ephumelelayo emzimbeni womuntu (isb uhlelo lwe-endocannbinoid). I-Ultrasonication iyindlela ephumelela kakhulu yokukhipha ama-decarboxylate cannabinoids (isb., I-CBDA, i-THCA, i-CBGA) kumafomu awo asebenza ngokweqile (isib, i-CBD, i-THC, i-CBG).
I-Decarboxylate Cannabinoids nge-Sonication
I-CBD yaziwa kakhulu ngemiphumela yayo yokukhuthaza ezempilo kanye nokwelapha. Kepha kuzo zombili izinhlobo zesitshalo se-cannabis, e-hemp nensangu, kutholakala ikakhulukazi i-cannabidiolic acid (CBDA), kanti i-cannabidiol (CBD) itholakala kuphela ngamanani amancane.
Uyini umehluko phakathi kwe-CBD ne-CBDA?
I-CBDA ingumanduleli we-CBD futhi ineqembu eline-asidi elinamathele kumolekyuli ye-CBD, okuthiwa yi-carboxyl-group. Kokubili, i-CBD ne-CBDA, yizinto ezingadakisi, ezingezona ezokusebenza kwengqondo, okusho ukuthi azivezi umphumela "ophezulu". Kepha imiphumela ye-bioactive ye-CBD ne-CBDA yehluke kakhulu. I-CBDA iyifomu engathathi hlangothi, engasebenzi kakhulu, ngenkathi – lapho i-decarboxylated ibe yi-CBD – ama-molecule e-CBD agcwalisa imiphumela yawo ephelele yokukhuthaza impilo njenge-supplement yezemithi kanye nokudla.
I-decarboxylation ithinta zonke ezinye izinhlobo ze-acidic cannabinoid ezifana ne-THCA, i-CBGA nezinye. Iqembu le-carboxyl liyasuswa ukuze amafomu asebenzayo, isib, i-CBD, i-∆⁹9-THC (iTHC), i-CBG njll.
I-Ultrasonic decarboxylation iguqula ifomu elingasebenzi kangako libe yifomu le-cannabinoid elisebenza kakhulu ngokususa iqembu le-carboxyl ngamagagasi amakhulu e-ultrasound.
I-Ultrasonic Cannabinoid Decarboxylation
I-decarboxylation (i-decarbing) isinyathelo esivamile ekusetshenzisweni kwe-cannabis. Enqubeni ejwayelekile yokuhlukanisa, abakhiqizi basebenzisa ukushisa okomile ezingxenyeni zezitshalo ezintsha ukuze kuguqulwe i-CBDA ibe yi-CBD, ∆9-THC-acid (THCA) ibe yi-∆9-THC (THC), i-CBGA ibe yi-CBG njll. pre-processing step ngaphambi kokukhishwa futhi kudinga isikhathi namandla.
I-ultrasonic decarboxylation idlula i-decarboxylation ejwayelekile ngezinzuzo ezahlukahlukene. Okokuqala, i-ultrasonic decarboxylation akuyona inqubo eyengeziwe yenqubo, kepha kwenzeka ngasikhathi sinye lapho ama-cannabinoids ekhishwa nge-ultrasonication kusuka ku-hemp noma insangu. Ukwelashwa kwe-Ultrasonic cannabis kuyindlela ephezulu yokukhipha kanyekanye ne-decarboxylation ye-phytocannabinoids. Inqubo ye-ultrasonic idlula ngamanani aphezulu wokukhipha kanye ne-decarboxylation ngaphansi kwamazinga okushisa alawulwayo nezikhathi zokwelashwa ezimfushane. Lokhu kuvimbela ama-phytocannabinnoids ngokumelene nokubola: Kokukhishwa kwe-cannabinoid kwe-ultrasonically decarboxylated, akukho cannbinol (CBN) etholakalayo. i-cannabinol ingumkhiqizo ojwayelekile we-oxidation futhi umaka wekhwalithi. Lokhu kusho ukuthi imiphumela ye-ultrasonic decarbing kukhishwe ikhwalithi ephezulu ye-cannabis.
Ngaphezu kwalokho, yonke imiphumela yesizinda etholwe nge-ultrasonically kanye nemiphumela ye-decarboxylation iyaphindeka ngokuphelele futhi iyazala kabusha. Njengoba yonke imingcele yenqubo ye-ultrasonic ilawulwa kahle, imiphumela yokukhipha kanye ne-decarboxylation ingaphinda ikhiqizwe ngokuthembeka. Lokhu kwenza ukuthi abakhiqizi bakwazi ukwenza inqubo yabo ifane futhi banikeze amakhasimende abo okukhishwa kwensangu yekhwalithi eqhubekayo ephezulu kakhulu.
I-ultrasonicator UP400St ingasetshenziselwa i-decarboxylation kanyekanye nokukhishwa kwama-cannabinoids avela ku-Cannabis Sativa L.
Izinzuzo ze-Ultrasonic Decarboxylation
Ukukhipha kanyekanye ne-decarboxylation
Inqubo Ebukhali, Engekho Eyashisayo
Akukho ukubola kwama-cannabinoids
Ukuphindeka, ukukhiqiza kabusha
Iyatholakala nganoma iyiphi ivolumu
Ikhwalithi yomkhiqizo ezimile
Ungayinquma kanjani i-Cannabinoids nge-Sonication
I-Sonication ingaguqula ama-cannabinoids ane-asidi njenge-CBDA, ∆9-THC-acid / TCA, CBGA njll ezinhlotsheni ze-CBD, i--9-THC, i-CBG njll. Ukuthola i-decarboxylation nge-ultrasonication, ukwelashwa kwe-ultrasound kuhlanganiswe ne ukwelashwa kokushisa. Lokhu kwaziwa njenge-thermo-sonication. Izithelo ezinhle ze-CBD, ∆9-THC, ne-CBG zitholakala ku-110 ° C.
Ama-cannabinoids nemiphumela yawo emzimbeni womuntu
Isitshalo seCannabis Sativa L. sicebile ngezinhlobo ezingaphezu kuka-113 zama-cannabinoid. Isibonelo, i-CBD, i-CBDA, i-THC, i-THCA, i-CBG ne-CBGA phakathi kokunye konke kungama-cannabinoids (abizwa nangokuthi ama-phytocannabinoids) atholakala kusitshalo se-cannabis. Ama-cannabinoids nawo atholakala emzimbeni womuntu, lapho asebenza njengama-molecule okusayina ohlelweni lwe-endocrine. Ama-cannabinoids akhiqizwa ngumzimba womuntu aziwa ngokuthi ama-endocannabinoids. Ama-Endocannabinoids asebenza njengama-neurotransmitters abopha kuma-cannabinoid receptors. Uhlelo lwebhayoloji lwe-endocannabinoids kanye ne-cannabinoid receptors lubizwa ngokuthi uhlelo lwe-endocannabinnoid futhi ludlala indima ebalulekile ekulawulweni kwemisebenzi yomzimba.
Njengoba i-cannabinoids etholakala ezitshalweni ingangena emadokhumeni e-cannabinoid womuntu, ama-cannabinoids anikezwa njengokwelashwa / ukwelashwa futhi njengezithako zokudla ezikhuthaza impilo.
I-UIP2000hdT i-decarboxylation yama-cannabinoids ane-asidi (isib. i-cannabinoidic acid i-CBDA) ku-cannabidiol esebenzayo (i-CBD)
Ama-Ultrasonic Extractors we-Cannabinoid Decarboxylation
Isizinda se-Ultrasonic kanye ne-decarboxylation ubuchwepheshe bokusebenza obunokwethenjelwa, obusiza futhi busheshise ukukhiqizwa kokukhishwa kwekhwalithi ephezulu ye-cannabinoid esitshalweni se-Cannabis Sativa L. (i-hemp nensangu). Iphothifoliyo yeHielscher Ultrasonics ifaka uhla oluphelele kusuka kuma-compact lab ultrasonicators kuya kumasistimu wokukhipha ezimbonini. Ngaleyo ndlela, thina kwaHielscher singakunikeza i-ultrasonicator efaneleke kakhulu kunqubo yakho ebekiwe yenqubo. Abasebenzi bethu besikhathi eside abanolwazi bazokusiza ekuhlolweni okungenzeka nasekusebenziseni inqubo ekufakweni kohlelo lwakho lwe-ultrasonic ezingeni lokugcina lokukhiqiza.
Ukuphrinta konyawo okuncane kwama-extractors ethu e-ultrasonic kanye nokuguquguquka kwawo ekukhethweni kokufaka kubenza balingane ngisho nasendaweni elinganiselwe kakhulu yezindawo zokucubungula i-cannabis. Amaprosesa we-Ultrasonic afakiwe emhlabeni wonke ezindaweni zokukhiqiza zokudla, i-pharma nezomsoco.
Isistimu Yokukhishwa Ephucukile Ne-Decarboxylation Systems
Iphothifoliyo yomkhiqizo we-Hielscher Ultrasonics ihlanganisa uhla oluphelele lwe-ultrasonicator ephezulu yokusebenza yokukhipha kanye ne-decarboxylation kusuka kokuncane kuya kokukhulu. Izesekeli ezingeziwe zivumela ukuhlangana okulula kokucushwa okuhle kakhulu kwedivayisi ye-ultrasonic ngenqubo yakho ye-cannabis / decarboxylation. Ukusetha okulungile kwe-ultrasonic kuya ngomthamo ocatshangelwe, ivolumu, impahla eluhlaza, inqubo ye-batch noma i-inline kanye nomugqa wesikhathi.
Ama-ultrasonicators ama-Hielscher angasetshenziselwa ukuqhutshwa nokuqhutshwa kokugeleza okuqhubekayo. Ukucubungula kwe-batch ultrasonic kufanelekile ekuhlolweni kwenqubo, ukwenziwa kahle futhi kube sezingeni eliphansi lokukhiqiza likasayizi ophakathi. I-Ultrasonic decarboxylation ye-acidic phyto-cannabinoids (isib., I-CBDA, i-THCA, i-CBGA) ingenzeka ku-beaker evulekile noma evaliwe ye-ultrasonic kanye nasekwelapheni okuqhubekayo kusetshenziswa i-ultrasonic flow cell reactor .. I-Hielscher Ultrasonics inesizinda esifaneleka kakhulu ne-decarboxylation ukusetha ivolumu yakho ye-cannabis nezinqubo zenqubo.
Uhla lomkhiqizo we-Hielscher Ultrasonics lumboza ububanzi obugcwele bama-processor we-ultrasonic kusuka kuma-compact lab ultrasonicators ngaphezulu kwebench-top kanye nezinhlelo zokushayela kumaprosesa asezimboni asebenza ngokugcwele anamandla wokucubungula ukulayisha amaloli ngehora. Uhla oluphelele lomkhiqizo lusivumela ukuthi sikunikeze nge-ultrasonic extractor / decarboxylator efaneleke kakhulu yempahla yakho eluhlaza ye-cannabis, amandla enqubo nezinhloso zokukhiqiza.
Onke ama-ultrasonicators aseHielscher alawulwa kahle futhi ngaleyo ndlela enokwethenjelwa amahhashi omsebenzi ekukhiqizeni. I-amplitude ingenye yezinqubo ezibalulekile zenqubo ezithonya ukusebenza kahle nokusebenza kahle kwe-ultrasonic isizinda se-Cannabis Sativa L. kanye ne-decarboxylation kanyekanye yama-cannabinoids.
Amasethingi we-amplitude aqondile nokuqapha unomphela kwemingcele yenqubo ye-ultrasonic nge-smart software kukunikeza ithuba lokuphatha impahla yakho ye-cannabis ngezimo ezisebenza kahle kakhulu ze-ultrasonic. I-sonication efanelekile yokukhipha okungcono nemiphumela ye-decarboxylation!
Izinqubo ze-Ultrasonic zingalinganiswa ngokuphelele. Lokhu kusho ukuthi yonke imiphumela oyizuzile usebenzisa ilebhu noma ibhentshi-phezulu i-ultrasonicator, ingakalwa ngokukhishwa okufanayo kusetshenziswa amapharamitha wenqubo efanayo. Lokhu kwenza i-ultrasonication ilungele ukuhlolwa okungenakho ubungozi, ukwenziwa kwenqubo nokwenza okulandelayo kokukhiqizwa kwezentengiso. Xhumana nathi ukuze ufunde ukuthi i-sonication ingakhuphula kanjani umkhiqizo wakho wokukhipha insangu.
Kungani ama-Decarboxylate Cannabinoids?
I-Decarboxylation inqubo yamakhemikhali lapho kususwa uchungechunge lwamakhemikhali njengeqembu le-carboxyl kwi-molecule. Esitshalweni se-cannabis, iningi lama-cannabinoids akhona ngendlela yawo ene-asidi njenge-CBDA, i-THCA, i-CBGA njll. Amafomu e-acidic aneqembu le-carboxyl elihlanganisiwe futhi laziwa njengefomu elingasebenzi kangako. Lawo mafomu ane-asidi ayizandulela zamafomu we-cannabinoid asebenzayo (isib. I-CBD, i-∆⁹9-THC, i-CBG njll.). Okwemithi yokwelapha, izithako zokwelapha nezempilo, ifomu le-decarboxylated, elisebenza kakhulu lama-cannabinoids kungenxa yezizathu ezisobala ezikhethwayo.
Ngakho-ke, iqembu le-acidic carboxyl lisuswa kuma-cannabinoids ngenqubo ebizwa nge- "decarboxylation".
Isibonelo, i-cannabis ingahlukaniswa nge-decarboxylated (colloquially also "decarbed") ngokusebenzisa ukushisa okomile. I-decarboxylation nayo iyenzeka lapho i-cannabis ishiywa ukwelashwa. Ngesikhathi sokuphulukiswa, uchungechunge lwe-carboxyl lwehla kancane, okuyinqubo edla isikhathi. Uma lokhu kwenzeka, i-CBDA namanye ama-cannabinoids ane-asidi alahlekelwa yi-asidi yawo. ngaleyo ndlela sisebenze ngokwengeziwe. I-Decarboxylation ingasheshiswa ngezinye izinqubo, njenge-thermo-sonication.
Mangaki ama-cannabinoids akwi-cannabis yami ekhishwe?
Ukuhlungwa kwama-cannabinoids kokukhishwayo kuncike kakhulu ohlotsheni lwesitshalo (uhlobo lwe-cannabis), indlela yokukhipha nokuthi ngabe isitshalo senziwe i-decarboxylated noma cha.